Barakacayaal Guryahoodii uu basbeeliyay Dab kacay oo Deeq lagu gaarsiiyay Garowe – SBC
Barakacayaal Guryahoodii uu basbeeliyay Dab kacay oo Deeq lagu gaarsiiyay Garowe
Posted by Webmaster on October 16, 2012 Comments
Dad barakacayaal ah oo ku ceyroobay Dab baa bi’iyay xero ay degenaayen oo ku taala magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ayaa maanta la gaarsiiyay Deeq .
Deeqdan la gaarsiiyay dadkan barakacayaasha ah ayaa waxa ay isugu jirtay bacaha Guryaha lagu dhisto iyo agabkale oo ay ka dhistaan guriyo ay harsadaan habeenkiina ku hoydaan, maadaama uu dabku bas beeliyay guryihii cooshadaha ka sameysnaa ee ay ku jireen.
Agaasinaha waaxda Arimaha Bulshada ee Dowlada Hoose Garoowe C/risaaq Ciise Cabdi ayaa u sharaxay warbaahinta sida ay ugu heelan yihiin caawinta iyo u gar gaarka walaalahooda dhibaatadu soo gaartay ee barakacayaasha ah.
“Diyaar ayaynu u nahay in wax alaale waxa aan awoodno ula soo gaarno, Dhul soomaaliyeed ayay joogaan” ayaa ka mid ahaa hadalada Agaasimaha,.
Hay’ada IOM iyo Urur maxali ah ayaa iska kaashaday howshan lagu gar gaarayay dadkan masiibada dabka ahi haleeshay waxaana Masuul u hadlay uu uga dar daarmay dadka barakacayaasha ah ilaaliyaan Nadaafada iyo waxyaabaha sahlayaa dhibaatooyinka uu dabku ka mid yahay.
Afhayeen u halay Dadkan barakacayaasha ah ee maata la gaarsiiyay Deeqda ayaa isagu ugaga mahad celiyay Dadka soo abaabulay deeqdan maanta la soo gaarsiiyay, waxaanu ku tilmaamay howlahan samafalka ah kuwo aad loogu baahnaa ayna siweyn ugaga mahadcelinayaan.
Sikastaba ha ahaatee Kaamkan ay degenaayeen Dadkan Barakacayaasha ah oo lagu magaacabo Riiga ayaa waxaa uu dab qabsaday baa bi’iyaya dhamaan dhismayaashii ka dhisnaa Habeenimadii jimcaha ee todobaadkii tagay.